HyperX Cloud Alpha S Gaming Headset (Black) ~ ICT.com.mm
HomeHyperX Cloud Alpha S Gaming Headset (Black)
ဂိမ်းကစားသူများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသည့် HyperX အမှတ်တံဆိပ် Headset ဖြစ်သည်။ Digital Signal Processing Sound Card ပါဝင်သည့်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံရရှိရန် အသံစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ Ear cups တွင်ပါဝင်သည့် Slider ကိုအသုံးပြု၍ Bass အသံ (၃)မျိုးမှ နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အမြင့်ဆုံး Bass အသံအတွက် maximum တွင်ထားနိုင်သလို Bass အသံကို... [Learn more]
Brand: HyperXFilter by: CVM, Gaming Headphones, Noise-cancelling Headphones, Over-ear Headphones, USD
ဂိမ်းကစားသူများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသည့် HyperX အမှတ်တံဆိပ် Headset ဖြစ်သည်။ Digital Signal Processing Sound Card ပါဝင်သည့်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံရရှိရန် အသံစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ Ear cups တွင်ပါဝင်သည့် Slider ကိုအသုံးပြု၍ Bass အသံ (၃)မျိုးမှ နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အမြင့်ဆုံး Bass အသံအတွက် maximum တွင်ထားနိုင်သလို Bass အသံကို နားမထောင်လိုပါက ပိတ်ထားနိုင်သည်။ Bass frequencies ကို Mid နဲ့ High ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်တဲ့အတွက် ဂိမ်းထဲမှာပါဝင်တဲ့အသံတွေကို ပိုမိုခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အသံပြတ်တောက်မှုလည်း နည်းပါးစေမည်ဖြစ်သည်။ဂိမ်းကစားသူများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသည့် HyperX အမှတ်တံဆိပ် Headset ဖြစ်သည်။ Digital Signal Processing Sound Card ပါဝင်သည့်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံရရှိရန် အသံစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ Ear cups တွင်ပါဝင်သည့် Slider ကိုအသုံးပြု၍ Bass အသံ (၃)မျိုးမှ နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အမြင့်ဆုံး Bass အသံအတွက် maximum တွင်ထားနိုင်သလို Bass အသံကို နားမထောင်လိုပါက ပိတ်ထားနိုင်သည်။ Bass frequencies ကို Mid နဲ့ High ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်တဲ့အတွက် ဂိမ်းထဲမှာပါဝင်တဲ့အသံတွေကို ပိုမိုခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အသံပြတ်တောက်မှုလည်း နည်းပါးစေမည်ဖြစ်သည်။
Driver: Custom dynamic, 50mm with neodymium magnets, Type: Circumaural, Closed back, Frequency Response: 13Hz – 27kHz, Impedance: 65 Ω, Sound pressure level: 99dBSPL/mW at 1kHz, T.H.D: ≤ 1%, Weight: 310 g, Element: Electret condenser microphone, Polar pattern: Bi-directional, Noise-cancelling, Frequency Response: 50Hz-18KHz, Sensitivity: -38dBV
Ustom-Tuned HyperX 7.1. Surround Sound1
Tuned by HyperX to ensure that players would get amazing in-game audio. The Digital Signal Processing sound card amplifies audio foramore immersive PC gaming experience.